FILOHA ANDRY RAJOELINA : Nakotroka ny fitsenan’ny vahoakan’i Manakara azy
Nigadona tao Manakara ny folak’andron’ny sabotsy lasa teo ny fiaramanidina manokana nitondra ny filohan’ny tetezamita teo aloha, Andry Rajoelina. Hafaliana, horakoraka, tamim-pientanana tanteraka no nitsenan’ny vahoakan’i Manakara ny tenany tamin’izany. 16 avril 2018
Nahazo fanasana manokana avy amin’ny fiangonana katolika indray ny filoha Andry Rajoelina. Omaly no notanterahina tao Vohipeno, manamorona ny reniranon’i Matitanana ny fotoampivavahana lehibe nanangana ho olotsambatra an’i ramose Lucien Botovasoa.
Ny sabotsy alina dia efa nisy ny alim-bavaka lehibe niarahana tamin’ireo mpino katolika tonga maro tany an-toerana niaraka tamin’ireo vahiny nasaina. Nitarika ny fotoana ny solotenan’i Papa François, Son eminence cardinal, Maurice Piat. Nanotrona azy tamin’izany ny Nonce Apostolique miasa eto Madagasikara, Paolo Rocco Gualtieri sy ireo Eveka sy Pretra maro. Nahazo fanasana manokana i Andry Rajoelina. Ity farany izay efa nigadona tany an-toerana ny antoandron’ny sabotsy. Hipoka, feno olona ny seranam-piaramanidina tao Manakara efa niandry ny fahatongavany.
Tsy nanakana ireo vahoaka an’aliny maro ny erikerika vokatry ny haratsian’ny toetr’andro teo am-piandrasana ny filoha Andry Rajoelina. Tamin-kafaliana tanteraka, tamin’ny fomba makotrokotroka tanteraka no nandraisan’ny mponin’i Manakara azy nandritra ny fahatongavany. Marihina fa tsy nisy ny tafa nataon’ny vahoaka fa fifampiarahabana fotsiny ihany no natao kanefa na izany aza dia hita ho velom-bolo tanteraka ny vahoakan’i Manakara nandritra io fihaonana fohy tamin’ny filohan’ny tetezamita io.
Taorian’izay dia nitanjozotra nihazo an’i Vohipeno, toerana izay hanaovana ilay fotoam-bavaka lehibe ny fiara tsy mataho-dalana nitondra azy. Teny an-dalana rehetra teny dia saika feno olona hatrany nikopakopaka sy efa sasa-niandry ny fandalovan’io fiara nitondra ny filohan’ny tetezamita teo aloha io ary tsy ambakan’izany ihany koa ny tao Vohipeno.
Hita taratra tao anatin’ny fihetsik’ireo vahoaka fa mangetaheta fiovàna izy ireo amin’ny alalan’ny fanovàna ny mpitondra ankehitriny sy ny fomba fitantanana izay hitan’izy ireo fa tsy nety sy tsy nahomby hatramin’izay. Velom-bolo avokoa ireo mponina amin’izay tanàna nandalovan’ny filohan’ny tetezamita, ny tenany izay andrandrain’ny vahoaka Malagasy fa olona tokana afaka hamoaka ny firenena ao anatin’izao fahantrana lalina mianjady amin’ny Malagasy izao.
Mitady ho very an-javony ny raharaha Mbola Rajaonah, Rolly, Fidèle FANAKORONTANANA FILAMINAM-BAHOAKA (296) 14 janvier 2019 Halefa eny amin’ny Fitsarana amin’izay ny dosien’i Mbola Rajaonah TALE JENERALIN’NY BIANCO (170) 17 janvier 2019 Nanamafy ny fanovana goavana hoentiny ny Filoha Rajoelina FANDRAISANA NY FITANTANANA NY FIRENENA (76) 20 janvier 2019 Tafakatra sivy ireo olona namoy ny ainy MAHAMASINA - FIHOTSAHANA TRANO (73) 20 janvier 2019 Rangahy iray 64 taona maty notetitetehina TSARAVANJA - ANTETEZAMBARO (56) 20 janvier 2019 Nahitana ombivavy bevohoka novonoin’olona AMPITOLOVA BELOBAKA MAHAJANGA (51) 20 janvier 2019